Civanyaylag နှင့် Obelisk ကတ္တရာသုံးလာ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[15 / 08 / 2019] အပျော်တမ်းအဏ္ဏဝါပြန် 1 သန်းပစ်မှတ်မှ Count	06 တူရကီ
Homeတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး33 MersinCivanyaylag နှင့် Obelisk ကတ္တရာသုံးKavuştu
12 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 33 Mersin, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, ကတ္တရာသတင်းများ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
civanyaylag နှင့် obelisks ကတ္တရာပျောက်ကင်းအောင်ကုသခဲ့ကြသည်
Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်က, ကတ္တရာအလုပ်မြေထဲခရိုင်အတွင်းရှိကျေးလက်နေရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆက်လက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ လမ်းနှင့်အတူမြို့တော်, Civanyaylag နှင့် Camila ရပ်ကွက် Hurriyet ရပ်ကွက်အတွင်းကျောက်ထဲမှာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ Obelisk မှရှည်လျားသောအချိန်လမ်းဟာကတ္တရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်း။ ပူပြင်းတဲ့ကတ္တရာအလုပ်နှစ်မျိုးနှစ်စုစုပေါင်း 1.756 တန်ချိန်အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်း၌ပြစ်မှားမိခဲ့သည်။
Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အဦများကတ္တရာရပ်ကွက်အတွင်းအပေါငျးတို့သပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မြို့တော်ခင်းကို Maintenance နှင့်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှအဖွဲ့များ, က Hurriyet လမ်းကနေကျောက်ဆောင်နှင့်အတူ obelisk ၏မြေထဲပင်လယ်ကောင်တီ Civanyaylag နှင့် Camila ရပ်ကွက်ရပ်ကွက်အတွင်းဆက်နွယ်နှင့်ကတ္တရာအလုပ်အချိန်တိုအတွင်းပြီးစီးခဲ့ပါသည်ရှိရာလမ်းပေါ်မှာဆက်ပြီးထားပါတယ်ပြင်ဆင်ခြင်း။ ပူပြင်းတဲ့ကတ္တရာအလုပ် 1.756 စုစုပေါင်းတန်ချိန်အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်း၌ပြစ်မှားမိခဲ့သည်။
ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူများ၏ဝယ်လိုအားနှင့် Mersin တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Hemant မျိုးရိုးကတ္တရာအားဖြင့်အစပျိုးအလုပ်၏ညွှန်ကြားချက်များကိုရပ်ကွက်အတွင်း၏ပြဿနာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဝန်ဆောင်မှုမရနိုငျဖြေရှင်းခဲ့သည်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
အဆိုပါ2Civanyaylag ရပ်ကွက်အတွင်း mukhtar ခုနှစ်တွင်ကာလဖြစ်ပါသည်အစ္စမေးလ် Toker, အခြေခံအဆောက်အအုံပြဿနာတွေဖြေရှင်းကြောင်းရပ်ကွက်, သူတို့ 1 နှစ်ပေါင်းကတည်းကကတ္တရာကိုမျှော်လင့်ဟု "ကျနော်တို့အသနားခံစာနှင့်အတူလျှောက်လွှာတင်သွင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လတ်တလောကောင်စီအစည်းအဝေး Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သမ္မတအတွက်ဤပြဿနာကိုမစ္စတာ Hemant မျိုးရိုးရှေ့ဆက်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်။ သူတို့ကအစစနေနေ့-တနင်္ဂနွေ, သူတို့တစ်တွေအကြီးအလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းလာခဲ့ပါဘူးမပြောခဲ့ပါဘူး "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Civanyaylag ရပ်ကွက်သုသာန်မှာလည်း Mukhtar Toker ကောက်ယူလေ့လာမှုများ, "မြို့တော်ဝန် Vahap ရွေးချယ်မှု, ထိုမှတ်ချက်ချ 'ငါအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို Mukhtar ငါ့လက်ျာလက်ရုံးတော်ရပ်ရွာသူကြီးများဟုတ်ပါတယ်,' 'ဟု၎င်းကပြောသည်။ ကျနော်တို့ချင်ခဲ့ဘူးပါလျှင်အဘယျသို့။ ဘုရားသခငျသညျသငျသညျကိုကောငျးကွီးပေး, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
အဆိုပါ obelisk မြို့တော်ဝန်မာမွတ် Yaman, ဝန်ဆောင်မှုရွေးကောက်ပွဲအပြီးတိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာရောက်ရှိလာခဲ့, "Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဥက္ကဌ Hemant မျိုးရိုးနှင့်ဘုရားသခင်၏အခြားလူကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကျနော်တို့ 'ဝန်ဆောင်မှု, ကျနော်တို့ကအနည်းဆုံးတဦးတည်းကိုပိုမိုနှစ်ကမျှော်လင့်ထားသောအရာ,' ကျွန်ုပ်တိုပြောနေခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အစောပိုင်းကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုမျှော်မှန်းထားသည်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းဒီလမ်းကြောင်းကိုလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာကြောကျကိုသူ့ခြေရင်း setting ခဲ့သည်တိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတွင်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောမုန့်သကဲ့သို့, လမ်းမပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်နေကြတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
Mukhtar အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်ရပ်ကွက်အတွင်း Yaman, ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးလက်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့မိလ္လာပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်းထောက်ပြပိုမိုအဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးကြောင်းကြောင့်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ဖို့အလုပ်လမ်းခင်းနှင့်ဖွဲ့နိုင်ငံသားများ၏လုပျငနျးပြုမိကြောင်းယူဆများနှင့်ကျောက်တုံးများနှင့် Liberty လမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
Gökbelကတ္တရာလမ်းရရှိခဲ့ 07 / 08 / 2014 Gökbelသည့်ကတ္တရာလမ်းမှရရှိသွားတဲ့: Gökbelအတွက် Alanya မြူနီစီပယ်လမ်းအားဖြင့်အစပျိုးကတ္တရာအလုပ်ကိုပြီးစီး။ Gökbel 11 တစ်လမ်းကတ္တရာအလုပ်ကိုပြီးစီးခဲ့ပါသည်ကီလိုမီတာအဖြစ် Alanya မြူနီစီပယ်, 'Gökbelကုန်းပြင်မြင့်ရိုးရာရေနံနပန်းပွဲတော်မတိုင်မီအစီအစဉ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Gökbelနှင့်ချဲ့ထွင်မှုလမ်းကြောင်းကိုကတ္တရာအလုပ်ဖို့မိုးရွာသွန်းမှုကုန်းနှင့်Öteköyပြီးနောက်, Hangman, Derekoy, Türktaşနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောစည်ပင်သာယာသိပ္ပံ Mahmutseydi အတွက်အသင်းများကိုကြွက်အလုပ်လုပ်ရပ်ကွက်အတွင်းလမ်းအဘိဓါန် Highland လမ်း2ကီလိုမီတာအပိုင်းများတွင်အလုပ်ခွံ့ပြုသည်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆန်မှာÖteköyအဘိဓါန် Highland နှင့်အဘိဓါန် Highland လမ်းမကြီးလမ်းစည်းမျဉ်း Akdag ၏ဧရိယာထဲမှာဖြန့်ချိçörezlပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ် Alanya မြို့တော်ဝန်ကိုအာဒံ Murat Yucel, ပြောနေကြပါတယ်မတိုင်မီ ...
တူရကီရွာ၌ကတ္တရာလမ်းများရရှိထားသူ 03 / 11 / 2014 တူရကီရွာ၌ကတ္တရာလမ်းများရရှိထားသူ: ရွာစည်းရုံးခြင်းကတ္တရာမှစတင်ခဲ့တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, အများဆုံးဝေးလံခေါင်သီခရိုင် (ကျေးရွာပေါင်း) အပါအဝင်အသစ်ကခရိုင်၏ကန့်သတ်, အတွင်း Capital ကိုပစ္စည်းကိရိယာများလမ်းခင်းတက်နွေးနေဆဲဖြစ်သည်။ နှစ်လိုင်းဆွဲနေတဲ့ခေတ်သစ်ကြည့်ထွက် check လုပ်ထားကြသည်, ထိုတူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ခြင်းအားဖြင့်ဖုန်ထူကတ္တရာ, မြေကြီး, ကျောက်ရွာလမ်းများasfaltlanıyမြင်ကြပြီ။ မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Melih, "ကျနော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲကတိပြုခဲ့သည်။ '' နယူးကတ္တရာအဖြစ်မြို့ရွာတပ်ဆင်ပါလိမ့်မယ် '' ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိတော်များအစားတစျဦးဆောင်ခဲ့ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ပွေးဆက်လက် "ဟု၎င်းကပြောသည်။ အများအပြားဒေသများ, အထူးသဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးအတွက်တာဝန်များပါဝင်သည်ရသောသစ်ကိုခရိုင်အတွက် ...
Solh ကျေးရွာပေါင်းကတ္တရာရရှိခဲ့ 30 / 09 / 2014 Solh ကျေးရွာပေါင်းကတ္တရာရရှိခဲ့: ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ကျေးရွာကျေးရွာ Tarhan ကျိုးကတ္တရာလမ်းများနှင့်အတူပထမဦးဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ မော်တော်ကားပိုင်ရှင်များရွာသားတွေသူတို့ကဆိုပါတယ်အလွန်ကျေနပ်နေကြသည်, သူတို့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုထုတ်ဖော်ပြောဆို။ ဆောက်လုပ်ရေးမနှစ်ကရွာ၌ပြုသောအမှုကတ္တရာလမ်းအလုပ်နှင့်အတူ Tarhan ရွာအလုပ်လုပ်၏အုပ်စု Asmaka ကျေးရွာElmasırtလမ်းစတင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျေးရွာ Tarhan ရွာကျိုးကတ္တရာလမ်းများနှင့်အတူပထမဦးဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုရွာသားတွေကားပိုင်ရှင်တွေဖော်ပြနေချိန်မှာသူတို့ကဆိုပါတယ်ဝမ်းမြောက်တတ်ကြ၏။ နိုင်ငံသားများ, "ကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်းမွမှေုနျ့၌တည်းခိုကြသည်, ကျေးဇူးတင်စရာရွာဆီသို့ငါတို့လမ်းကိုဖန်ဆင်းကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းကြောင်းကိုခင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ လှူဒါန်းခဲ့သူကိုလူတိုင်းကအရမ်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "သူတို့ကဆိုပါတယ်။ ရွာနှင့်ရွာအကြား Tarhan Asmaka ...
ပထမဦးစွာအချိန်လက်တစ်ကျေးရွာလမ်းမကြီးဟော့ကတ္တရာသုံးလာ 17 / 10 / 2014 Mus အထူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်, ရွာ milky ပူကတ္တရာဖုံးလွှမ်းအတွက် 1.7 ကီလိုမီတာလမ်း: ပထမဦးဆုံးအချိန်လက်တစ်ကျေးရွာလမ်းမကြီးဟော့ကတ္တရာသုံးရရှိသွားတဲ့။ ပူပြင်းကတ္တရာအမှိုက်ပုံအတွက်အလုပ်လုပ်နို့ကျေးရွာပေါင်း; အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Vedat Büyükersoyနှင့်အထူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်Şeyhmus Yente ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအခါမြို့ဝန်နို့Büyükersoyသူမြို့သားတွေကအတူ chatted ရှိရာရွာကပြောသည်။ တူညီသောမြို့တွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံသားများအဖြစ်နေထိုင်ခြင်း၏အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းရောက်ရှိဖို့န်ဆောင်မှုအယူအဆများ၏ရွာများတွင်နေထိုင်သူများဟုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးBüyükersoy: ။ "ကျနော်တို့ရုံးဆီသို့ရောက် လာ. , ပထမဦးဆုံးနေ့ကကျနော်တို့ကတည်းကဒီပစ်မှတ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ကျေးရွာကျနော်တို့အမှန်စင်စစ်ပေး၏ပြည်နယ်အချိန်ကိုင်ပြီးပြောကြားခဲ့့သည်က ...
fats OSB ဟော့ကတ္တရာသုံးလာ 29 / 11 / 2018 ဒေသ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့အလှူငွေသူတို့ရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် superstructure ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် upgrade ဆက်လက်ကမ်းလှမ်း, Fatsa ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံပူကတ္တရာကိုရရှိထားသူဖြစ်သည်။ ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံ Fatsa ကြည်းတပ်မြို့တော်ဝန် Peters Tekintaş၏ကျောရိုး, ကပြောသည် "ငါတို့လမ်း 1800 မီတာရှည်ပူကျနော်တို့ကကတ္တရာကိုကူးဖွဲ့စည်းထားခြင်းစက်မှုဇုံလမ်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ tradesmen ၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီချိတ်ဆက်," ဟု၎င်းကပြောသည်။ ကလူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အနေအထားအတွက်တံခါးကိုဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံဖွင့်နှင့်အတူ Fatsa ဖှဲ့စညျးခွငျးအားဖွငျ့တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ပူကတ္တရာအလုပ်ကသမ္မတTekintaş "Fatsa, ကျောရိုးနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များကိုစက်မှုဇုန်အတွက်လုပ်" ကျနော်တို့ရပ်တည်ချက်၏စက်မှုဇုန်များဖိထားပြီး "ကျနော်တို့အလုပ်ရှာဖွေသူများရေရှည်တည်တံ့ရမည်ဖြစ်သည်။ တပ်မတော် ...
ရွှေ Halim ဟော့ကတ္တရာသုံးKavuştuခဲ့သည် 07 / 07 / 2019 ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, ရွှေပူကတ္တရာလက်ကားဈေးကျောင်းဝင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်စေခဲ့သည်။ ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mehmet Hilmi Guler "ရုံးမယူမီကျွန်ုပ်တို့၏ပြည်နယ် tradesmen ကတည်ဆဲပူကတ္တရာ၏သက်တမ်းတိုးလိုအပ်ကလည်း, ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုခဲ့သည်။ Hal ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tradesmen ပိုကောင်းရ," ဟု၎င်းကပြောသည်။ အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းနှင့်ခရိုင်စင်တာများရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်အုပ်စုပူကတ္တရာအလုပ်ကိုမှအလေးချိန်ပေးသည်လမျး၌တပ်မတော်မြို့တော်မြူနီစီပယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသမားတွေဌာနကျောင်းဝင်းပူကတ္တရာအလုပ်ရှိပြီးသားပျက်စီးကတ္တရာပေါ်ပြုမိခဲ့ခရိုင််ထမ်းဆောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးများ Halin အားဖြင့်ရွှေ Horde ပြီးနောက်အလုပ်ဆက်ပြောသည်။ tradesmen Hal သူတို့ရဲ့ဂတိတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရန် ...
ပထမဦးဆုံးအကတ္တရာ Kumlucad တစ်နှစ်တာယိုဖိတ်ခဲ့သည် 02 / 06 / 2014 Kumlucad တစ်နှစ်တာ၏ပထမဆုံးကတ္တရာယိုဖိတ်ခဲ့သည်: မြို့တော်မြူနီစီပယ်အက်ဥပဒေ, Kumluca, Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏နယ်နိမိတ်ချဲ့ထွင်ပါကပထမဦးဆုံးကတ္တရာအလုပျ၏ထောက်ခံမှုနှင့်အတူဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ခါးစုစုပေါင်း 120 ရှေ့တော်၌ထိုထက်ပိုသောမြို့ပြခရိုင်နှင့်ကျေးရွာများ၏နယ်နိမိတ်အတွင်း Kumluca ခရိုင်အခြေချနေထိုင်မှုအတွက်ကတ္တရာအလုပ်တထောင်စတုရန်းမီတာလုပ်ဖို့ရပ်ကွက်အတွင်းဥပဒသို့လှည့်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, tarring ၏ပစ်လွှတ် Kumluca မြို့တော်ဝန် Husain Cetinkaya ရာအရပ်ကိုကြည့်ရှုအားပေး။ အဆက်မပြတ်အလုပ်နှင့်အတူသမ္မတဦးသိန်းစိန် Cetinkaya, နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ မြို့တော်ဝန် Menderes သူတို့ Turel Cetinkaya နှင့်အတူန်ဆောင်မှုကိုထုတ်လုပ်အတွက်ကျန်းမာညှိနှိုင်းထိန်းသိမ်းရန်ကြောင်းမှုကိုအလေးအနက်, အခင်းလျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။
မြို့ပြအသွင်ပြောင်းကတ္တရာရောမွှေပါလိမ့်မယ် 01 / 07 / 2014 မြို့ပြအသွင်ပြောင်းကတ္တရာရောမွှေပါလိမ့်မယ်: မြို့ပြအသွင်ပြောင်းမူဘောင်6အတွက်ဖြိုဖျက်လိမ့်မည်။ 500 တန်ချိန်သန်းအစိမ်းရောင်အုတ်ဘိလပ်မြေဆောက်လုပ်ရေးစွန့်ပစ်နေထုတ်လုပ်ခံရဖို့စတင်ခဲ့ငါးသန်းအိမ်များကနေလာကြလိမ့်မည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်မြို့ပြဝန်ကြီးဌာန, အစိမ်းစွန့်ပစ်၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အစိမ်းရောင်အုတ်နှင့်ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ပထမဦးဆုံးစက်မှုဇုန် application ကိုအပြီးသတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစွန့်ပစ်ရာမှဖယ်ရှားခံနှင့်လူ့နျြးမာရေးအတှကျပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာအန္တရာယ်အချက်များရည်ရွယ်ထံမှမြို့ပြအသွင်ပြောင်း၏စီမံကိန်းသည်စီးပွားရေးလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဖြိုဖျက်စွန့်ပစ်ရာမှဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာများ၏ဖျက်သိမ်းရေး၏ပမာဏ, နေ့တိုင်းတိုးပွားလာဖြင့်ကန့်သတ်သိုလှောင်မှုပြဿနာများပံ့ပိုးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အဆောက်အဦးများဖျက်သိမ်းစွန့်ပစ် Project မှတီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် xnumx't စွန့်ပစ်၏စီးပွားရေးအသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ protocol များဆောက်လုပ်ရေး ...
ကတ္တရာက Non-လူပျိုကောင်တီ 18 / 07 / 2014 ကတ္တရာက Non-လူပျိုကောင်တီ: ပြည်နယ်အနှံ့ကြည်းတပ်ပူကတ္တရာလျှောက်လွှာ Akkus မြို့လယ်မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောခရိုင်, ဖုံးအုပ်ခြင်းခံရဖို့နွေရာသီပူပြင်းတဲ့ကတ္တရာဖြစ်ပါတယ်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး Samsun7။ မြို့တော်ဝန်ဟေရှာပန်းပဲဆရာသွားရောက်လည်ပတ် Akkus အတွက်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Mehmet Cetin အာဏာပိုင်များသည် Akkus ၏လမ်းကြောင်းအတွင်းရှိအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်နိုင်ရန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး Samsun7။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Mehmet Cetin, သူတို့တပ်မတော်သာခရိုင်ပူကတ္တရာ Akkus ပြုပါဟုဆိုသည်။ အဲဒါကိုလုပ်နေတာ၏လမ်းဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Cetin ညွှန်ပြ Akkus ခှဲဝေဒီအဆင့်မှာမဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကသူကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိလမ်းကြောင်းယခုကှဲပွားလမ်းကိုဖန်ဆင်းခံရဖို့မသင့်တော်ဖြစ်ပါတယ်လမ်းကြောင်းခွဲထွက်ဖြစ်နိုင် ...
အဆိုပါအရည်ကျိုကတ္တရာမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်း 13 / 08 / 2014 အဆိုပါအရည်ပျော်ကတ္တရာမျက်နှာပြင်ကုသမှု: ပူပြင်းတဲ့လေထုကြောင့် Tokat အတွက်ကတ္တရာလမ်းမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်းမှအရည်ပျော် Erbaa, Niksar, Reşadiyeနှင့်Başçiftlikခရိုင်ပူလေကြောင်းဆက်သွယ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်အတူအရည်ပျော်yapıldı.tokat drive ကိုတစ်ခက်ကတ္တရာနေထိုင်ခဲ့သိရသည်။ ကွင်းမှသူတို့ SER ဖြင့်ကျောက်စရစ်မျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်းကိုဖုံးလွှမ်းလမ်းကိုအပေါ်ရွေ့လျားနောက်ဆုံးသင်း။ အဆိုပါယာဉ်များ၏တာယာကနေလမ်းညွှန်ကျောက်ခဲတို့ကိုမော်တော်ယာဉ်များ၏ပြတင်းပေါက်မှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကြံပြုနေစဉ်ကြေမွကတ္တရာ၏လုပ်မတော်တဆမှုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြောင်းမော်တော်ကားဒရိုင်ဘာ, သွန်းလောင်းဖြစ်ပါတယ်။
fats OSB ဟော့ကတ္တရာသုံးလာ
ရွှေ Halim ဟော့ကတ္တရာသုံးKavuştuခဲ့သည်
ပထမဦးဆုံးအကတ္တရာ Kumlucad တစ်နှစ်တာယိုဖိတ်ခဲ့သည်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (243) ဇူလိုင်လ 2019 (636) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (619) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (518) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (665) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (827) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (734) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (831) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)